Ken Follett | Zvazvino Zvinyorwa
Ken Follett Ndiye mumwe wevanyori vanozivikanwa kwazvo pasi rose. Akave nemukurumbira pasi rese nebhuku rake "Mbiru dzePasi", asi pachokwadi aive atove nemamwe mabhuku mazhinji pasi pebhandi rake uye vaverengi "vakanwa" mabhuku ake vaive vazhinji.
Kana usati wanzwa nezvemunyori uye uchida kuziva zvakawanda nezvake, tinokukoka iwe kuti uzviite pazasi nekuti isu takanyora zvese zvaunoda kuti uzive nezve hupenyu hwemunyori uyu.
1 Ken Follett ndiani
1.1 Anoshanda aKen Follett
1.2 Chitsuwa chemadutu
2 Iyo 'imwe' Ken Follett
3 Ken Follet mabhuku
Ken Follett ndiani
Tinogona kutaura kuti Ken Follett ndomumwe wevanyori vanotengesa zvakanyanya pasi rose, anozivikanwa uye kuti pese paanoburitsa bhuku kune vakawanda vanoenda kuzvitoro zvemabhuku kwaari. Asi isu tinoda kusunungura munyori, kuti tizive zvishoma nezve hupenyu hwake hwega.
Kune izvi, tinofanira kutanga muna Chikumi 1949. Chaizvoizvo musi wechishanu ndipo paakasvika muCardiff, kumhuri inonamata zvakanyanya. Follett aive wedangwe pahama nhatu uye akararama hudiki hwakaratidzirwa nevabereki vake, Martin naVeenie Follett. Kukupa zano, ivo vairambidzwa kuteerera redhiyo, kuona terevhizheni kana kuenda kumamuvhi.
Saka kuna Ken Follett nzira chete yekuzvivaraidza yaive kuburikidza nenyaya. Izvi zvakarondedzerwa naamai vake uye fungidziro uye fungidziro yaaive nayo achiri mudiki yakaita zvese. Nekudaro, pasina chekuita, akadzidza kuverenga achiri mangwanani uye mabhuku akashanda senzira yekutiza kubva kuhupenyu hwake hunofinha. Neichi chikonzero, aive nenzvimbo yake yaanofarira raibhurari yeguta rake.
Pazera remakore gumi, mhuri yaFollett yakatamira kuLondon uye yakaramba ichidzidza ipapo. Akanyoresa muFilosofi paUniversity College, chimwe chinhu chakashamisa vazhinji kubvira, ari mwanakomana wemutarisiri wemitero, zvaifungidzirwa kuti achatevera tsoka dzababa vake. Asi nekuda kwenzira yaakakura nayo, sezvo mhuri yake yainamata zvakanyanya, aive azere nekusahadzika uye iro basa yaive nzira yekutsvaga mhinduro kune izvo zvaaive nazvo mupfungwa dzake. Muchokwadi, iye munyori anofunga kuti sarudzo iyi yakamukurudzira semunyori.
Pazera remakore gumi nemasere, akasangana nemamiriro asinganzwisisike nezera rake. Uye ndezvekuti, paakanga achidzidza uye aine nguva yakanaka kuYunivhesiti, musikana wake, Mary, akaita nhumbu uye vaviri ava vakapedzisira varoora mushure kwetemu yekutanga yezvidzidzo. Akaenderera nebasa iri, achishuvira zvematongerwo enyika, uye akazopera munaGunyana 18.
Anoshanda aKen Follett
Achangopedza kudzidza, Follett akafunga kuita dhigirii repashure muutapi venhau, chimwe chinhu chakatanga kuwana iyo "bug" nekunyora. Muchokwadi, akatanga kushanda semutori wenhau muCardiff, kuSouth Wales Echo.
Apo mwanasikana wavo, Marie-Claire, paakaberekwa makore matatu gare gare, akazova munyori wenhau weLondon Evening News.
Zvisinei nekuti aive achiwana basa, akaziva kuti hope dzake dzekuve mutapi wenhau anobudirira dzaisazombouya, saka akafunga kuchinja mafambiro ake ndokutanga kunyora ngano munguva yake yekusara, husiku nehusiku. kupera kwevhiki.
Izvo zvakaitwa, gore rakatevera, muna 1974, akafunga kusiya basa rake mupepanhau ndokujoina Everest Mabhuku, muparidzi weLondon kwaakatanga kuburitsa mabhuku ake, kunyangwe pasina kana rimwe rawo rakabudirira. Kusvikira yasvika. "Island of Storms" raive bhuku rakaburitsa Ken Follett muboka rinotengesa zvakanyanya.
Iri bhuku, rakaburitswa muna 1978, rakahwina mubairo weEdgar uye rakatengesa anopfuura mamirioni gumi emakopi kusvika parizvino. Nekuda kweizvozvo, Ken Follett akasiya basa rake ndokuhaya imba yekumaodzanyemba kweFrance kuti azvipire zvachose kumanovhiri ake anotevera. Ehe, nekutya kwekutadza kudzokorora zvaakange awana pamwe nekubudirira kukuru.
Zvakatora makore matatu kuti Ken Follett arongedze mabhegi ake zvakare uye aende, zvakare, kuLondon, kunyanya kuSurrey. Uye iyo sinema, theatre uye mamwe marudzi evaraidzo akamukwevera kudzoka kuguta. Panguva iyoyo, Follett akanyanya kufarira zvematongerwo enyika. Aive nechekuita nesarudzo mushandirapamwe weLabour Party, kwaakasangana naBarbara Broer, munyori webazi remuno rebato. Akawira murudo naye uye akamuroora mu1984. Ivo vanogara muHertfordshire rectory, uko vana vaKen Follett, vana vaBarbara, pamwe nevakaroorana navo nevazukuru.
Nezve basa rake, Barbara anga ari Mumiriri weStevenage kubvira 1997 uku Ken Follett achienderera mberi nekunyora; Uyezve, haana kumbobvumira zvematongerwo enyika kupinda mumabhuku.
Mirayiridzo yake yekunyora ndeyekutanga kunyora mushure mekudya kwekudya kwemangwanani uye kuenderera kusvika ina masikati, paanomira kuti azorodze uye kuzorora.
Iyo 'imwe' Ken Follett
Kazhinji Ken Follett isu tinoziva rake rekunyora padivi asi, Unoziva here kuti ndiye zvakare mutungamiri wemamwe masangano? Ehe hongu, chaizvo, inozivikanwa kunge iri:
Mutungamiri weDyslexia Action.
Nhengo yeBhodi revatungamiriri veNational Literacy Trust.
Nhengo yedare rechikoro cheRoebuck Primary Chikoro uye Nursery.
Honorary Doctorate muMabhuku, kubva kuYunivhesiti yeGlamorgan.
Nhengo yeRoyal Society of Arts.
Honorary Mutungamiri weStevenage Community Trust.
Uye, kunyangwe hazvo nguva yake yakapihwa kumabhuku, munyori anoziva kuzvirongedza kuti azadzise zvimwe zvipikirwa, uye kubatsira kwaanodiwa. Pamusoro pekubatikana kwazvo nemhuri yake.
Ken Follet mabhuku
Pano tinokusiya iwe a runyorwa rwemabhuku ese akaburitswa naKen Follett, dzimwe nguva inosainwa kuburikidza nemazita ekunyepera akasiyana.
Maapuro Carstairs akateedzana (1974-1975), akasaina pasi pekunyepedzera Simon Myles
Iyo Huru nhema
uye The Big Hit
Spy dzakateerana Piers Roper (1975-1976), yakasainwa nezita rake
Iyo Bear Inobvuta
Mamwe mabasa akasainwa nemanyepo akasiyana (1976-1978)
Vana vechidiki, pasi pemanyepo Martin Martinsen
Chakavanzika cheKellerman Zvidzidzo kana Chakavanzika cheKellerman Zvidzidzo
Iwo mapatya ane simba kana Chakavanzika chenyika yehonye
Inoshanda pasi pemanyepo Bernard L. Ross
Amok: Mambo weLegend
Novels pasi pemanyepo Zachary Stone
Novels dzakasaina nezita rako kubvira 1978
Chinokosha chiri muna Rebecca.
Murume anobva kuSt.
Husiku pamusoro pemvura.
Mari ine njodzi.
Nzvimbo inonzi rusununguko.
Mbiru dzePasi Saga
Nguva yechando chenyika.
The Heist of the Century, 1978, naRené Louis Maurice; (yakanzi muUnited States The Gentleman wa16 Chikunguru).
Notre-Dame, 2019, bhuku mutero kukereke ye Notre Dame de Paris mushure memoto wayo.
Zvino zvaunoziva Ken Follett zvishoma zvirinani, iwe unotsunga kuverenga zvimwe zvemabhuku ake? Ndeupi wawakanyanya kufarira?
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Literature » Vanyori » Ken Follett